China Ceramic PEEK စာရွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Hengbo
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEEK Semi- ချောထုတ်ကုန်များ > Peek စာရွက် > ကြွေ PEEK စာရွက်
ကြွေ PEEK စာရွက် is well known as having the best balance of chemical resistance, wear resistance and heat resistance among all thermoplastic.We have been manufacturing the ကြွေ PEEK စာရွက် since 2019. We are expecting become your long-term partner in China.
Shore ကို: D Hardness
Izod သက်ရောက်မှုစွမ်းအား ï¼ˆNotchedï¼ ‰
Izod Impact Strengthï¼ˆun-Notchedï¼‰
ISO180 / IU ကို
Flow Properties ကို
400c @ ထဲမှာပါတဲ့အရည်ပျော်
5 / 400â, 5kgs
ကြွေ PEEK စာရွက် are used for Industrial, automotive, medical, အာကာသစခန်းစသည်ဖြင့်
Diameter of ကြွေ PEEK စာရွက် are from 6mm to 50mm and length is 1200mm, width is 600mm
ကြွေ PEEK စာရွက် are approved by REACH and RoHS
PEEK Sheet အတွက်လိုင်း (၆) ခုရှိသည်။ လိုအပ်သည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ပေးမည်။
hot Tags:: စျေး ၀ ယ်ခြင်း၊ ဈေးနိမ့်၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ၀ င်ငွေ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေး၊ ဈေးနှုန်း, CE